नेपालको इतिहासमा लेखिने अर्को कालोदिन थपियो ! || विचार
नेपालको इतिहासमा लेखिने अर्को कालोदिन थप...
सरकारले जनगणनाको काम सम्पन्न गरेको छ । आज यी शब्दहरु पाठकहरुका हातमा पर्दासम्म सरकारले जनगणना सम्पन्न गरेको घोषणा पनि हुन सक्छ । तर जनगणना धेरै ठाउँमा हुन सकेको छैन भन्ने जानकारी हामी नागरिकहरुलाई भइरहेको छ भने सरकारलाई नहुने कुरै भएन । तर सरकारले औपचारिकता पूरा गरेको छ । २०७८ सालमा जनगणना सम्पन्न भएको भन्ने इतिहास पढ्नेहरुले अवश्य पनि स्मरण गर्ने छन् ।
२०७८ सालको जनगणना नेपालको इतिहासमै सबै भन्दा कमजोर जनगणना सावित हुने निश्चित छ । नेपाली भूभाग छिमेकी देशले आगटेको छ । ती भूभागमा बस्ने नेपाली नागरिकहरु नेपालको जनसंख्यामा कसरी पर्लान् र अब ? सरकारले छिमेकी देश भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेकर लिम्पियाधुरामा जनगणनाको काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । यो क्षेत्रमा जनगणनाका लागि खटिएका गणकहरु पुग्न समेत सकेका छैनन् । गणकहरुले ती क्षेत्रमा पुग्नको लागि भारत भूमि भएर जानुपर्ने भएका कारण दार्चुला प्रशासनले भारतपक्षलाई पत्राचार गर्दा पनि यात्रा गर्ने अनुमति नदिइएका कारण त्यहाँ गणकहरु पुग्न नसकेको जनाइएको छ । यो दुखःद पक्ष हो, यो लज्जाजनक विषय पनि हो । आफ्नो भूभागमा पुग्ने बाटोसमेत सरकारले बनाउन सकेको छैन भने त्यो क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले अन्य सुविधाहरु के उपलब्ध गराएको होला र ?
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङरु र तिकंर गाउँको जनगणनाका लागि जनगणना कार्यालय दार्चुलाको टोली ३ दिनको जोखिमपूर्ण पैदल यात्रा गर्दै छाङरु पुगेको जनाइएको छ । दार्चुलाका जिल्ला जनगणना अधिकृत पदमराज पाण्डेले जनाए अनुसार खलंगाबाट प्रस्थान गरेको सहायक जनगणना अधिकृत खगेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोली छाङरु पुगेर जनगणनाको काम सुरु गरेको छ । तर छाङरु र तिकंर दुबै गाउँमा जनगणना गरिसक्न ३ दिन लाग्ने पाण्डेले जानकारी गराएका छन् । सम्भवतः आजसम्ममा यो काम सम्पन्न हुने आशा गर्न सकिने छ । चिसो छल्न तिकंरबासी बेँसी झर्न थालेकाले जनगणना गर्न चुनौती थपिएको पनि उनले जनाएका छन् । जनगणना अधिकृत पाण्डेका अनुसार केही स्थानीयहरु चिसो छल्न बेँसी झरिसकेको खबर सुन्नमा आएको छ त्यहाँका गणक राजेन्द्र कार्की हिँड्न नसक्ने भएपछि खलंगामै थलिएका छन्, गणक खटाएर बेसी झरेका स्थानीयहरुको गणना खलंगामै गरिनेछ । व्यास गाउँपालिका–१ बाहेक जिल्लाका अरु वडाहरुको जनगणना कार्य भने अन्तिम चरणमा पुगेको पाण्डेले जानकारी गराए । नेपालतर्फको बाटो निकै असहज भएकोले भीर पहरामा हिँड्दा ज्यानको समेत जोखिम हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर गणकहरु फर्किँदा हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए । नेपालतर्फ सुरक्षित बाटो नहुँदा व्यास गाउँपालिकाका स्थानीयहरु भारतीय बाटोको प्रयोग गर्दै सदरमुकाम खलंगाबाट गाउँसम्म आवतजावत गर्दै आएका रहेछन् । भारतले गणकलाई बाटो नदिँदा सहायक जनगणना अधिकारी खगेन्द्र कार्की र कार्यालय सहयोगी लोकेन्द्र नेपालतर्फकै जोखिमपूर्ण बाटो हुँदै व्यास पुगेका थिए ।
भारतले गणकलाई मात्रै जान नदिएको तर स्थानीयहरु पास लिएर अहिलेपनि आवतजावत गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिद्धराज जोशीले खुलासा गरेका छन् । विवादित क्षेत्रमा गएर पनि जनगणना गर्छ कि भन्ने आशंकाले गणकलाई भारत पक्षले पास नदिएको हुनसक्ने प्रजिअ जोशीको भनाई छ ।
घुम्न जाने नेपालीलाई पास दिइरहेको भारतीय प्रशासनले बाटो बिग्रिएको र केन्द्र सरकारको अनुमति नभएको भन्दै गणकहरुलाई भारतीय बाटोबाट व्यास जान अनुमति नदिएका कारण भारतको असहयोगी भावना स्पष्ट भएको छ । विशाल छिमेकी देशका शासकहरु किन यस्तो संकुचित बनेका हुन् ? आश्चर्यजनक विषय हो । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नाबि, कुटी र गुञ्जी गाउँमा गएर जनगणना गर्न सम्भव नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले नै जानकारी गराएका छन् । सुरक्षाको जिल्लाप्रमुखको जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिबाटै यस्तो लाचारी व्यक्त भएपछि अरु कस्ले हिम्मत गर्ने ? वि.सं. २०२८ सालमा जनगणना हुँदा त्यो क्षेत्रमा मैले जनगणना थिए भनेर दावी गर्ने बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल अहिले पनि गर्व गर्नु हुन्छ । त्यही जनगणनाको आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हुन् भन्ने प्रमाण नेपाल पक्षले प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर ५० वर्षपछि भइरहेको २०७८ सालको जनगणनामा त्यो क्षेत्र पुग्न नसकिने अवस्था बन्यो । यो अवस्थाले दुईवटा प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेका छन् । सर्वप्रथम त ५० वर्षसम्म पनि नेपाल सरकारले त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई आवागमनको लागि गोरेटोबाटोसमेत बनाएको रहेनछ भने अरु विकास के भएको होला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ । त्यो क्षेत्रका बासिन्दा नेपाली नागरिकता च्याँपेर नेपालको सरकारलाई कर तिरेर भारतबाट गुजारा चलाइरहेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपाली हुनुको गर्व गर्ने कि दुखः व्यक्त गर्ने ?
केन्द्रिय तथ्यांक विभागले वैकल्पिक स्याटलाइट प्रयोग गरेर जनगणना गर्छौँ भनेर पनि उद्घोष गरेको थियो तर त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै किसिमको जनगणना गर्न सकिने सम्भावना नरहेको बुझिएको छ । यस कारण पनि २०७८ सालको जनगणना नेपालको इतिहासमा ठूलो दुर्घटनाको रुपमा चित्रित हुन पुगेको छ । यो जनगणनाले मान्यता पाउने हो भने नेपालले व्यास क्षेत्र गुमायो भन्न सकिन्छ । यो घटनाले नेपालको इतिहासमा अर्को कालोदिन थपिएको छ, इतिहास लेख्ने देशभक्तव्यक्ति रहेछ भने अवश्य यो दिनलाई कालोदिन भनेर उल्लेख गर्ने छ ! -जनधारणा साप्ताहिकबाट